Weftigii Madaxweynaha Somaliland Hogaaminayay Oo Dalka Ku Soo Laabtay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Weftigii Madaxweynaha Somaliland Hogaaminayay Oo Dalka Ku Soo Laabtay
Published on January 8, 2018 by Khadar A Muse (Hargeisa Office) · No Comments
Hargeysa (SDWO): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Md. Muuse Biixi Cabdi iyo weftigii uu hoggaaminayey, ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay soo dhammaysteen safar shaqo oo laba maalmood qaatay , kaas oo ay ku tageen dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Madaxweynaha oo ay wehelinayaan wasiirada arrimaha dibedda Dr. Sacad Cali Shire, Waxbarashada iyo Sayniska Md. Yaasiin Maxamuud Xiir(faro-toon), Caddaaladda Md. Cabdiqani Maxamuud Xaateeye, taliyeyaasha ciidamada Booliska iyo Ilaalada Xeebaha sareeye gaas Cabdilaahi Fadal Iimaan iyo sareeyo guuto Cabdi Xirsi Ducaale.
Waxay subaxnimadii hore ee saaka kasoo degay garoonka caalamiga ah ee Cigaal International Airport, waxana uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi salaan sharafeed ka qaatay cutub katirsan ciidamada qaranka oo halkaas ku sugnaa.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo warbaahinta kula hadlay gudaha madaarka Cigaal International Airport, ayaa si mug leh u faahfaahiyey waxyaabihii uga soo qabsoomay safarka ay ku tageen dalka Jabuuti.
Waxaanu sheegay inay soo dhaweyn diirran kala kulmeen madaxweynaha dalka Jabuuti iyo xubno kamid ah golihiisa wasiirrada, waxaana isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi,“Intii aanu joognay Jabuuti si wanaagsan oo milgo leh oo qurux iyo xarrago leh ayaa naloo soo dhaweeyey, waxaanu is aragnay madaxweynaha dalka Jabuuti.
Sidoo kale waxaanu la kulanay wasiirrada dhigayaga ah, waxaanu kormeer kusoo marnay mashaariic horumarineed oo aad u badan oo qiimo leh, ku dayashona mudan, xalayna jaaliyadda reer Somaliland ee dalka Jabuuti ayaanu la kulanay.”
Wasiir Sacad oo hadalkii sii wata, ayaa sheegay inuu safarkaasi ahaa mid shaqo, waxaana uu tilmaamay inay labada dal ee Somaliland iyo Jabuuti leeyihiin xidhiidh ma guuraan ah oo dhinacyo badan leh, “Safarkaasi si wanaagsan buu noogu dhacay, mid saaxiibtinimo iyo mid shaqo-ba wuu ahaa, mid inaga iyo Jabuuti inaga dhexeeya ayuuna ahaa, taas oo ka turjumaysa ehelnimada iyo cilaaqaadka wanaagsan ee dhinac walba ah.
Jabuuti waa waddan aynu leenahay cilaaqaad taariikhi ah oo qoto dheer oo dhinac walba ah, haddii ay ganacsi tahay, haddii ay isu socodka dadka tahay, haddii ay ehelnimada tahay, haddii ay dhaqaale tahay iyo haddii ay mid ammaan tahayba, xidhiidhkeenuna mid saaxiibtinimo oo kali ah ma ahee waa mid jaarnimo iyo mid dhinac walba ah,” ayuu yidhi wasiir Sacad Cali Shire.
Wasiirku waxa uu xusay inay wefti ahaan soo dhaweyn meeqaamkeedu sarreeyo kala kulmeen dalka Jabuuti, waxaana uu mid mid u dul istaagay waxyaabaha ay sida gaarka ah diiradda ugu saareen wada-hadalladii labada dhinac yeesheen.
Waxaanu yidhi,“Anigu muddo badan oo ilaa 8-sanadood ah baan dawladda kusoo jirey, dalal badanna waanu tagnay, laakiin sida Jabuuti naloogu soo dhaweeyey si la mid ah cid inoo soo dhaweysay ma jirto, marka ay madax waddamo isu yimaadaan waxa laga wada hadlaa dano wajiyo badan leh oo dhinacyo siyaasadeed, dhaqaale, siyaasadeed, ganacsi iyo nabadgelyo leh.
Annagu-na intaba waanu ka wada hadalnay, waxa wada-hadalkayaga kamid ahaa sidii loo wada ilaashan lahaa khayraadka badda, sidii loo fududayn lahaa socdaalka, ganacsiga loo fududayn lahaa la isagana caawin lahaa xagga tabobarrada iyo waxyaabo badan oo ka turjumaya danaha labada dal”.